We Fight We Win. -- " More than Media ": မြန်မာ နိင်ငံအရေး သံတမန်ရပ်ကွက် သတင်းများ
မြန်မာ နိင်ငံအရေး သံတမန်ရပ်ကွက် သတင်းများ
သံတမန် သတင်းရပ်ကွက်က အဆိုအရ ဗဟိုဘဏ်တွင် ငွေမရှိတော့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ရင်းနှီးးမြှုပ်နှံမှုတွေ လာကြည့်ပြီး ပြန်သွားသူတွေသာဖြစ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေနဲ့၂၀၁၅ ခုနစ်အထိ လှည်ပတ်နိင်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်ခက်လှကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းခေါင်းမာ ဂုိုဏ်းသားဆိုသူများလဲမရှိတော့ကြောင်း ဇူလိုင် တွင် ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး၊ ဦးအောင်သောင်းတို့ အနားယူ ကုန်တော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဦးသိန်းစိန် တို့ အဖွဲ့ သာ
အစိုးရအဖွဲ့ မှာအင်အားကောင်းလာမယ်လို့ သူယူဆကြောင်းနဲ့ဦးသိန်းစိန် ကိုယ်တိုင်က
အပြောနဲ့အလုပ်လက်တွေ ပြရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
အမေရိကန် အစုိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကို စောင့်ကြည့်နေကြောင်း စစ်ရေးအရ ပူးပေါင်းမှုတွေကိုဖိတ်ခေါ်သော်လည်း သာမန် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆင်ခြေဆင်လက်တွေပေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ လိုကြောင်း အမေရိကန် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက ဦးဝဏမောင်လွင် ကို သတိပေးလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၃ နစ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာ အစိုးရပရောဂျက်ကြီးတွေလုပ်ဖို့ အတွက် မလုံလောက်ကြောင်း သတိပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ၊ တိုင်းရင်းသားများနဲ့အရှေ တည်တန့် မဲ့ အပြစ်ခတ်ရပ်စဲရေးများ ပြုလုပ်ဖို့ နဲ့ တရားဥပဒေဆိုးမိုးရေးကို ဖြစ်အောင်အကောင်
အထည်ဖေါ်ဖို့ လိုကြောင်း အမာဂိုဏ်းတွေက မလုပ်ခြင် လို့ သူတို့ လုပ်လို့ မရဖြစ်နေပါတယ်
ဆိုတဲ့ဆင်ခြေဟာလုံလောက်တဲ့ဆင်ခြေမဟုတ်တော့ဘူးလို့ သူတို့ က ဦးဝဏမောင်လွင်ကို အသိပေးလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးသန်းရွှေလက်ထက်က မြေ အေက ဟက်တာသန်းပေါင်းများစွာ ကို ခရိုနီများအား လက်ဆောင်ပေးခဲ့မှု ကြောင့် တောနေသူများ အလုပ်လက်မဲဖြစ်က ထိုင်းနိင်ငံတွင်းသို့မြန်မာ
၅ သန်းကျော်ဝင်ရောက်လာမှုဟာ ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေကြောင်း အသိပေးခဲ့တယ်လို့ ဆုိုပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာပြသနာကို ဆက်လက်မပြန့် ပွားအောင်ထိမ်းသိမ်း
ပေးတာကိုတော့ အသိမှတ်ပြုကြောင်း သို့ ရာတွင် မြန်မာပြည်ပေါက်ဘင်ဂလီများကိုတော့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်အခြစိုက်ခွင့်ပြုဖို့ လိုကြောင်း ဆိုပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ တာဝန်ဟာ တရားဥပဒေစိုးမှုနဲ့ လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ လိုအပ်ကြောင်း သတိပေးလိုက်
ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha.
Only those who slave mindset like ASSK and her followers will like this type of news and writing.
remember ASSK said that her kneel is so hard, wait and see first if it true.